UNgqongqoshe uvikela u-R260m owanikwa amakhansela angakhethwanga okhethweni | News24
UNgqongqoshe uvikela u-R260m owanikwa amakhansela angakhethwanga okhethweni
Cape Town – UNgqongqoshe wezokuBusa ngokubaMbisana kanye nezindaba zoMdabu, uDes van Rooyen, usekuvikele ukukhokhwa kwemali engu-R260m eyakhokhelwa labo ababengamakhansela nabahlulwa okhethweni lohulumeni basekhaya ngonyaka odlule, wathi zonke izisebenzi ezimele uhulumeni ziyakhokhelwa imali ewulolu hlobo.
UVan Rooyen ukusho lokhu ngesikhathi ephendula abezindaba ngoLwesine ekuseni ngaphambi kokuba ethule isabelomali soMnyango wakhe eSishayamthetho sikaZwelonke.
“Kusukela ngokhetho lohulumeni basekhaya, sesibone amakhansela amasha engena ehhovisi ukuzovala izikhala ezingacishe zibe ngu-5 000 zabangazange babuye.
OLUNY UDABA: Sesinikele enkantolo isikhulu esaxoshelwa ukubhikisha ngoZuma
“Kulokhu, iningi lamakhansela angabuyi afanelekile kuze kube manje asekhokhelwe imali ekhokhelwa umsebenzi ekupheleni komsebenzi, okucishe kufinyelele enanini elingu-R260m.”
Ebuzwa ukuthi angakusekela kanjani ukukhokhwa kwale mali ekubeni kunobubha obudlangile ezweni kanye nenqwaba yomasipala abadonsa kanzima ngenxa yezinkinga zezimali, uVan Rooyen uthe abasebenzi abamele uhulumeni komasipala bakhokhelwa imali engaphansi kunabakwezinye izindawo.
Ngokolwazi lwakamuva lwe-remuneration commission olwashicilelwa ngomhlaka-11 kuNovemba, izimeya zihola u-R1.24m ngonyaka, osomlomo bomasipala kanye namasekela ezimeya u-R1m, amalungu ekomiti lemeya, osihlalo bemikhandlu kanye nosotswebhu u-R940 680, bese kuthi amakhansela wona ahole u-R540 031.